कटहरीमा तेस्रो गाउँपालिका अध्यक्ष कप क्रिकेट सुरु
विराटनगर, मंसिर २१–मोरङको कटहरी गाउँपालिकामा अध्यक्ष कप क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु भएको छ । युथ फर सोसाइटी कटहरीको आयोजनामा कटहरी–२ मा शनिबारदेखी सुरु भएको तेस्रो गाउँपालिका अध्यक्ष कप क्रिकेट प्रतिगोगिताको उद्घाटन गाउँपालिका अध्यक्ष रामकुमार कामतले रिवन काटेर गरे ।
सो अबसरमा बोल्दै अध्यक्ष कामतले खेलकुदको विकासले मात्र समाज र राष्ट्रको पहिचान झल्कने बताए । उद्घाटन कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) १ नं. प्रदेश कमिटी सदस्य मृत्युञ्जयकुमार झाले विकृति विसंगती अन्त्यका लागि खेलकुदका माध्यामबाट युवाहरुलाई क्रियाशिल बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले कुलत र विकृतिमा लागेका युवा र युवालाई नकारत्मक कृयाकलापबाट जोगाउनका खेलकुदमा कृयाशिल गराउन सके सिंगो समाजको विकास क्रमलाई अगाडी बढाउनसमेत मदत पुग्ने बताए । नेता झाले बेरोजगार युवाहरु कुलतमा फस्ने सम्भावना बढी हुनाले उनीहरुलाई खेलकुदमा आवद्ध गराएर राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी बनाए उनीहरुले विश्वमै सिंगो गाउँपालिका र राष्ट्रको नाम राख्ने बताए ।
उद्घाटन खेलमा कटहरी–३ विजयी
शनिबारबाट सुरु भएको सो प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा कटहरी वडा नं. ३ ५१ रनले विजयी भएको छ । टस जितेर पहिले व्यटिङ गरेको कटहरी–३ ले निर्धारीत २० ओभरको खेलमा कटहरी–६ लाईं १ सय ३६ रनको विजयी लक्ष्य दिएको थियो । १ सय ३७ रनको विजयी लक्ष्य सहित मैदानमा उत्रिएको कटहरी–६ पुरै ओभर खेलेर ५८ रनमै अल आउट भयो ।
गाउँपालिकाका ७ वटै वडा, रंगेली नगरपालिका, शिसवनी जहदा, विराटनगर महानगरपालिका लगायतका विभिन्न टिम सहभागि हुने सो गाउँपालिका अध्यक्ष कप क्रिकेट प्रतियोगिताको विजेताले ५० हजार रुपैयाँ नगद, ट्रफि, मेडल र प्रमाण पत्र प्राप्त गर्ने छ भने उप–विजेताले २५ हजार नगद ट्रफि, मेडल र प्रमाण पत्र प्राप्त गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
महिला फुटबल :नेपालका लागि भारत ‘फलामे च्यूरा’सरह
हवाई क्षेत्रको सुरक्षा र गुणस्तर प्राथमिकतामा :पर्यटनमन्त्री भट्टराई